Donald Trump: "Meel walba oo ay tagto way xumaataa, Soomaaliya ayay ka bilowday" - Jigjiga Online
HomeWararka CaalamkaDonald Trump: “Meel walba oo ay tagto way xumaataa, Soomaaliya ayay ka bilowday”
Washington (JigjigaOnline) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa bartiisa Twitter-ka ku weeraray safiirkii hore ee Mareykanka ee dalka Ukraine, Marie Yovanovitch, iyadoo ay socoto dhegeysiga caddeymaha xil ka qaadista.
“Meel walba oo ay Marie Yovanovitch aadday way xumaatay,” Mr Trump ayaa sidaasi qoray. “Waxay ka bilowday Somalia, sidee ayay taasi noqotay?”
Maxaa ka dhacay goobta dhegeysiga?
Iyadoo si toos ah ugu jawaabeysa qoraalka Twitterka ee Mr Trump, oo u muuqday mid iyada lagu cambaareynayo inay qas ka abuurtay Somalia, ayay Ms Yovanovitch ku jawaabtay: “Uma maleynayo inaan leeyahay awood noocaas ah, kuma lihi Mogadishu iyo Somalia iyo meel kaleba.
“Waxaan run ahaantii u maleynayaa in meelaha aan ka soo shaqeeyay sanadaha badan aniga iyo dadka kaleba ay ka dhigeen meel walaagsan, waad ogtahay, gudaha Mareykanka iyo sidoo kale dalalka kale ee aan ka soo shaqeeyay.
Jawaabteeda ayaa si toos ah telefishinnada looga baahiyay.
Adam Schiff, oo ah madaxa Guddiga Sirdoonka ee Dimuqraaddiyiinta ee korjoogtada ka ah dhegeysiga caddeymaha xil ka qaadista, ayaa sheegay in qoraallada Twitter-ka ee madaxweynaha ay u muuqdaan kuwo loogu hanjabayo marqaatiga.
Muxuu ku saabsan yahay dhegeysiga caddeymaha xil ka qaadista?
Dhegeysiga caddeymaha xil ka qaadista ayaa lagu baarayaa haddii madaxweyne Trump uu joojiyay gargaar milatari oo uu Mareykanka siin lahaa Ukraine si uu cadaadis ugu saaro madaxweynaha cusub ee dalkaa inuu baaritaan musuqmaasuq ku bilaabo imadaxweyne ku xigeenkii hore Joe Biden, oo haatan ah musharrax dooarshada Mareykanka.
Mr Trump ayaa beeniyay inuu wax khalad ah sameeyay, isagoo xil ka qaadista ku tilmaamay “mid lagu dhibaateynayo madaxtinnimadiisa”.
Ms Yovanovitch oo fadhigeedu ahaa magaalada Kyiv ayaa shaqada laga cayriyay bishii May, labo bilood kahor markii uu soo ifbaxay wada sheekeysigii telefoonka ku dhex maray Trump iyo dhiggiisa Ukraine Volodymyr Zelensky, kaasoo haatan udub dhexaad u ah caddeymaha.
Shirkii Xisbiga EPRDF Oo Furmay, Madaxdii Tigray-g Oo Ka Dareertay Iyo Madaxweyne Mustafe Cagjar Oo Dhex Fadhiya